China Painting robhoti Mugadziri uye Supplier |Yunhua
Seimwe yeakanyanya compact 6 axis Kubata robhoti, HY1010A-143 inoshanda-yakawanda, inogona kushandiswa Painting, zvidimbu zvidiki palletizing, kurodha uye kuburitsa basa.
HY1010A-143 irobhoti 6 axis pendi, iro rinoshandiswa zvakanyanya mukupfapfaidza zvikamu zvidiki uye zvepakati mumaindasitiri akasiyana uye inopa vatengi mhinduro yehupfumi, yehunyanzvi, yemhando yepamusoro yekupfapfaidza.Iine hunhu hwekukura kwemuviri mudiki, kuchinjika kwakanaka uye kuchinjika, kurongeka kwepamusoro, nguva pfupi yekurova.HY1010A-143 inogona kusanganiswa nyore nyore nenhevedzano yezvishandiso zvekubatsira senge turntable, slide tafura uye conveyor cheni system.Nekugadzikana kwayo uye zvinoenderana nehunyanzvi hwekupenda, HY1010A-143 inogona kuchengetedza zvakanyanya pendi uye nekuvandudza mwero wekudzoreredza wependi.
HY1010A-143 yakashongedzerwa nemudziyo mutsva wekudzidzisa wekupfapfaidza, une mitauro yakawanda yekutsigira, ichipa mushandisi-inoshamwaridzana interface robotic control cabinet ine yekucheka-kumucheto tekinoroji.Vashandisi vanogona kudzidzisa nemaoko kana point kuratidza nhamba yekuwana kudzidzisa, nyore uye nekukurumidza kushanda
6 10KG ± 0.06mm 3KVA 0-45 ℃ 170KG pasi IP54/IP65(chiuno)
Chikamu chekuita J1 J2 J3 J4 J5 J6
±170° +85°~-125° +85°~-78° ±170° + 115-140 ° ±360°
Maximum kumhanya 180°/s 133°/s 140°/s 217°/s 172°/s 172°/s
Robhoti rakapfeka anti-static zvipfeko pendi Aluminium yakakandwa
Yooheart robhoti yekupenda zvikamu zvidiki
Fan pendi application
Kushandisa HY1005A-085 robhoti yekupenda application.
Q1.Unogona here kupa anti-kuputika Painting robot?
A. MuChina, hapana mhando inogona kupa anti-kuputika robhoti.Kana iwe ukashandisa Chinese brand robhoti kupenda, anti-static hembe dzinofanira kupfekwa uye robhoti rinogona chete kufamba nzira uye yekupinza kana yekubuda masaini kumushini wekupenda.
Q2.Chii chinonzi Anti-static nguo?Unogona kupa?
A. Anti-static mbatya ndiyo inogona kudzivirira static magetsi.Munguva yekupenda maitiro, panogona kunge paine mamwe mamiriro senge mazhenje anokonzeresa moto, rudzi urwu rwembatya runogona kudzivirira mazhenje.
Q3.Unogona here kuisa kuongororwa kwechiratidzo pane robhoti yekupenda?
A. Kuti ushandise zviri nyore, zvakanaka kuti utarise chiratidzo.
Q4.Ungapa mhinduro dzakakwana dzekupendi application?
A. Kazhinji musanganisi wedu achaita izvozvo, kwatiri isu, mugadziri webhobhoti, tinogona kupa muchina wekupenda uye robot yakabatana, iwe unongoda kutamisa robot munzira yako.Uye ipa mhinduro kuti chigadzirwa chinopa sei.
Q5.Ungatiratidza vhidhiyo nezve Painting application?
A. Chokwadi, unogona kuenda kuYouTube Channel yedu, kune vhidhiyo yakawanda
Zvakapfuura: Kupenda robhoti HY1050A-200
Zvinotevera: Kurodha uye kuburitsa robhoti yeCNC lathe muchina